को बन्लान भारतका नयाँ सीडीएस ? चर्चामा जनरल नरवणे « Kathmandu Pati
प्रकाशित मिति : २०७८, २३ मंसिर बिहीबार १४:१०
काठमाण्डु – भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) विपिन रावतको हेलिकोप्टर दुर्घटना मृत्यु भएको छ । बुधबार दिउँसो भारतीय सेनाको आईएएफ एमआई १७ भी हेलिकोप्टर तामिलनाडु राज्यको कुन्नर भन्ने ठाउँमा दुर्घटना हुँदा रावत र उनकी पत्निसहित १३ जनाको मृत्यु भएको हो ।
रावत विलिंटनस्थित स्टाफ कलेजमा तालिम लिइरहेका अधिकृतहरुलाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ गएका थिए । खराब मौसमका कारण हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको बताइएको छ । सेनाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन छानबिन गर्न आदेश समेत दिएको छ । रावत भारतको पहिलो चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ समेत हुन ।
उनलाई गत जनवरीमा उक्त पदमा नियुक्त गरिएको थियो । उनि भारतीय थल सेनाको २७ औं सेनाअध्यक्ष हुन । उनको अन्त्यष्टी भोलि शुक्रबार हुँदैछ । उनको मृत्युले सिंगो राष्ट्र नै स्तब्ध भइरहेका बेला अबको सीडीएस को बन्लान ? भन्ने सर्वत्र चासो हुन थालेको छ ।
सीडीएसको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेका बेला सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणेको नाम चर्चामा छ । उनी बाहेक वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी र नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. र हरिकुमारको नाम पनि अघि सारिएको छ ।
बुधबार नै रावतको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण आकस्मिक बैठक बसेको थियो । रिपोर्टका अनुसार उक्त बैठकमा सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको नाममा सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणेको नाम शीर्षस्थानमा रहेको बताइएको छ ।
यसको एउटा कारण हो जनरल नरवणे तीनवटा सेना (सेना, वायुसेना, नौसेना)का प्रमुखहरूमध्ये वरिष्ठ हुन् । जनरल नरवणे आगामी अप्रिलमा सेना प्रमुखको पदबाट अवकाश लिँदैछन् । सेनाको परिमार्जित नियमअनुसार सेनाका अधिकृतले ६५ वर्षको उमेरसम्म चिफ अफ डिफेन्स स्टाफको पदमा काम गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै १९ महिनादेखि पूर्वी लद्दाखमा चीनसँग सैन्य भिडन्त भइरहेको छ । यस खण्डमा सीडीएस रावतले सेनालाई बलियो बनाउने ठूलो जिम्मेवारी खेल्दै आएका थिए । चाहे त्यो योजना होस् वा प्रशिक्षण होस् । उनले तीनै सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वयका लागि पुलको काम समेत गर्दै आएका थिए । यस अवस्थामा भारतीय सरकारले सीडीएसको जिम्मेवारी कसलाई देला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।